विदेशबाट सुन ल्याउँदा कति तिर्नुपर्छ भन्सार शुल्क ? - ramechhapkhabar.com
विदेशबाट सुन ल्याउँदा कति तिर्नुपर्छ भन्सार शुल्क ?
विदेशबाट फर्कंदा नेपालीले ल्याउने ‘अवैध’ सुनको मात्रा घट्न थालेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँचमा कडाइ गरेपछि काँचो सुनलाई गहना भनी ल्याउने क्रम घटेको हो । गहनाको रुपमा सामान्य तोडमोड गरेर काँचो सुन नै भित्रिन थालेपछि भन्सार कार्यालयले कडाइ गरेको थियो ।
शुक्रबारकै दिन १६१ जना यात्रुले ६६ लाख ७४ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ भन्सार महशुल बुझाएर ६ केजी ९१ ग्राम सुन फिर्ता लगेका छन् । भट्टराईका अनुसार बरामद भएको सुनमध्ये शनिबार ७१ जनाले भन्सार महशुल तिरेर ३ केजी १० ग्राम सुन फिर्ता लगे । यसबाट २९ लाख ७९ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले बताए । भन्सार कार्यालयले मंगलबार विदेशबाट फर्केका २ सय २१ जना यात्रुबाट ११ किलो ‘अवैध’ सुन बराम गरेको थियो । यसैगरी बुधबार ३ सय २६ जना यात्रुबाट १५ केजी १६ ग्राम र बिहीबार २ सय ११ जना यात्रुबाट ९ केजी ७७ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो ।